Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Raadkii Macangaga Ahaa Ee Bulshadeena By C/lahi C/ Ibraahim.
Maqaal: Raadkii Macangaga Ahaa Ee Bulshadeena By C/lahi C/ Ibraahim.
Posted by Dulmane	/ January 10, 2019
Hab dhaqan gooni ah ayuu kaga tagay maamulkii macangaga ahaa qayb ka mid ah Bulshadeena! Habka iyo nooca uu u fikiro shakhsi, Waxaa saameeya ama raad ku reeba cida iyadu markaa masuuliyada isbidaysa.
Hitler markuu majaraha u hayay wadankaasi Germany wasiirkiisii dacaayada u xilsaarnaa wuxuu kula tacaali jiray Bulshadiisa isaga oo uga gollahaa in uu hanto quluubtooda. “Waxaan ku Celcelinaynaa hadalada beenta ah, anagoo ogsoon Inayna waxba ka jirin”. Ilamaa ay ka aaminayaa dadku waxaan sheegaynaa inay dhab tahay”
Waa wado ay maraan kaligood taliyayaashu si dadka u adoonsadaan. Balse waxaa xusid mudan in damiirka iyo qalbiga ruuxa fayaw inuuna marna aqbali karin xumaanta markuu samaynayo, kuna raaxaysan karin marnaba.
Culimada Cilmi Nafsigu waxay aaminsan yihiin in qalbiga qofku yahay dhinaca hab dhaqanka sida caruurta oo kale Hadba wixii la aaminsiiyo in uu qaato tabtaasna wax ufuliyo. Bulshadeena waxaa jira in iyadu tiro ahaan yar, balse saamayn laxaad leh kaga tagay maskaxdooda maafiyadii waxbaan matalaa lahayd. Dadkaas oo u baahan in wacyigooda kor loo qaado si loogu soo celiyo tubtii nolosha saxda ahayd.
Siyaabaha ay adeegsadaan kaligood taliyayaasha aan marna wax dan ah kala lahayn bulshada ayaa adeegsata sifooyin kala duwan oo ciqaabeed, oo ay ugu yar tahay caga juglayn iyo handadaad, xidhay, dil, iyo tacadiyo kaloo badan. Iyadoo taasina marag ka tahay sida buuxda ee dadyawgaasi ugu fashilmeen habdhaqankooda Maamul.
Dadka Nolosha Guusha ka gaadhay waxay aaminsanyihiin in lawada guulaysto inay nolosha saxda ah ku jirto. Naca, xasadka, kali isbidka wanaaga waa tilmaanta dadka liita. Waxaana si buuxda ugu sifoobay kuna aragnay kuwii maafiyada ahaa magacay doonaanba ha wataane, fadhigooduna ahaa jigjiga iyo Addis Ababa.
Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya maanta wuxuu cagta saaray dhabihii hanka iyo himilada aayaheena. Rag wuxuu ka sheekeeyaa bi’iisa si uu uga gaashaanto waayihii nolosha ee la soo darsay, khibrad iyo waayo aragnimana u qaata cashiradii uu la soo hadhsaday maalmihii tagay inta uu la nool yahayna inuu la wadaago ay gar tahay.
Markastana waxyaabahaasi ma noqon karaan kuwo naga durkinkara darajada hanka sare ee aan ku taamayno inaan hanano Idam Alle.
Cabdullaahi Cabdi Ibraahim.
Wariye madax banaan.